Enweghị usoro n'ime òtù dị iche iche na-emepe ọdịnaya bụ n'ezie ezigbo ịtụnanya. Mgbe m nwetara email na njehie, lee otu ad na typo, ma ọ bụ pịa njikọ nke dakwasịrị na peeji a na-ahụghị… Eziokwu adịghị m na anya Mgbe m gị n'ụlọnga bụ nwata, anyị mere ndudue ndị a dị ka nke ọma, tupu-ekwusara ọdịnaya na-emeghị ka ya site na a zuru nyochaa n'ime ihe nzukọ… si mbọn, nnabata, isiokwu, imewe, site na ọha na eze. Usoro nyocha na nkwenye bụ ihe kwesịrị.
N'ọtụtụ ụlọ ọrụ, ihe ndị na-eme na ọdịnaya na-abụkarị ihe yiri ya ma nwee usoro a na - emegharị - mana ụlọ ọrụ ndị ahụ ka na - arụ ọrụ karịa site na email iji nyochaa, nyefee, ma kwado faịlụ… na - akpata esemokwu mbipute, overlaps, na ọgba aghara zuru ezu tupu ị nweta akara ahụ ịkwanye iberibe ahụ dị ndụ. Nke ahụ bụ oge buru ibu na-eme ka onye ọ bụla metụtara.